IXiaomi Mi Band 2, oyena mlingane wakho ubalaseleyo we-iPhone [ividiyo] | Ndisuka mac
IXiaomi Mi Band 2, oyena mlingane ubalaseleyo we-iPhone yakho [ividiyo]
Ifakiwe | | Izixhobo, Izaziso
Uhlobo oludumileyo lemvelaphi yaseTshayina luhlaziye isongo salo esaziwa ngexabiso eliphantsi. Sithetha nge Xiaomi My Band 2, Isixhobo esityhilwa njengeqabane elifanelekileyo le-iPhone yethu ukulinganisa yonke into enxulumene nomsebenzi wethu womzimba, ukulinganisa ukulala kwethu kunye nokugcina irekhodi lokukhutshwa kwethu.
Namhlanje eApplelizados senza okwahlukileyo kwaye sithetha ngayo Xiaomi My Band 2 Kungenxa yokuba, emva kokusebenzisa uguqulelo lwayo lwangonyaka kunye nesiqingatha, nasemva kokuba ndingumsebenzisi we-Apple Watch malunga nonyaka, ndiyakuqinisekisa ukuba le, ubuncinci, yenye yezona zinto zilungileyo sinokuzisebenzisa kunye kwi-iPhone yethu.
Xiaomi Mi Band 2 | UMFANEKISO: Powerplanetonline.com
La Xiaomi My Band 2 imele ukutsiba okumgangatho ophakamileyo ukusuka kwisizukulwana sokuqala sale nto yokunxiba. Ngoku faka ifayile ye- Umboniso weOLED ukumelana okuphezulu kunye ukusetyenziswa kancinci esivumela ukuba sijonge yonke idatha ebhalisiweyo ngokuchukumisa eyakho iqhosha elilodwa lokuchukumisa. Ngale ndlela, enye yeenzuzo eziphambili zokusetyenziswa ngoku kukuba akusafuneki ukuba sivule usetyenziso I-Mi Fit ukujonga umgama esiwuhambileyo, amanyathelo athathiweyo, ukubetha kwentliziyo yethu okanye iikhalori esizitshisileyo, kuba sinento yonke esihlahleni.
Ukongeza, i Xiaomi My Band 2 iphucule inkqubo yakho yealgorithm kwaye ngoku ngqo ngakumbi xa kuziwa ekubaleni amanyathelo, ukulinganisa ixesha lokuphumla, njalo njalo.
Kwaye elinye lamanqaku amakhulu akholwayo yiyo ukuxhathisa okukhulu. Nje ukuba uthabathe isongo uyakuqonda ukuba ayisiyiyo "iplastiki enexabiso eliphantsi"; yi ikhululekile, iyamelana, ayinabunzima kwaye inenqanaba langaphandle le-IP67, ke ukumelana nothuli, amanzi nokubila.
Olunye lweempawu eziphambili ze Xiaomi My Band 2 Zizo:
Isikrini se-OLED se-intshi eyi-0.42
Intambo ye-USB iyabiza
Imbali yedatha engenisiweyo
Ukumelana ne-IP67 emanzini nothuli
Ibhetri: 70 mAh
Ukuzimela kweentsuku ezingama-20
Ubunzima be-7 g kuphela
Iyahambelana ne-iOS 7.0 okanye ngaphezulu kunye ne-Android 4.4 okanye ngaphezulu
Ukuvula ngokuzenzekelayo ukuba usebenzisa nayiphi na imodeli ye-Xiaomi ye-smartphone: iyahambelana.
Ndingenza ntoni ngeXiaomi Mi Band 2?
La Mi Band 2 Isixhobo esinxitywayo ikakhulu esilungele iimbaleki zobungcali, amateurs okanye nawuphina umntu ofuna ukuthatha ulawulo lomsebenzi wabo womzimba kunye nokuphucula. Ngayo unga:
Bala amanyathelo athathiweyo
Bala umgama ohanjiweyo
Cwangcisa iinjongo kwaye ufumane isaziso sokungcangcazela xa uzifikelele
Lawula ukubetha kwentliziyo yakho
Bala iikhalori ozitshisileyo
Linganisa imijikelezo yakho yokulala
Jonga yonke imbali yedatha yakho ebhalisiweyo
Cwangcisa ialam evumayo eza kukuvusa ntsasa nganye ngendlela eqhubekekayo kunye nendalo
Fumana isaziso ngokushukuma xa ufumana umnxeba
Kwaye konke oku, ngaphandle kokuyisusa, kuba ungabaleka nayo, ulale, uhlambe kwaye uye elwandle.
Ukuba ufuna isacholo sokulinganisa esingakucinezeli ngezaziso eziqhubekayo, uyilo olunonopheleyo kwaye oluhle, ukumelana okuphezulu, kunye nexabiso eliphantse lokuthengwa, sicebisa thenga iXiaomi Mi Band 2, ngokuqinisekileyo awuyi kuzisola. Kwakhona, ukuba ukhetha naziphi na iimodeli zangaphambili ngaphandle kwescreen, unokukhetha iMi Band 1 okanye iMi Band 1 ngexabiso elingcono kunangaphambili.
Kwaye ngoku, ndikushiya nolu hlolisiso lwevidiyo yejelo lethu elikhethiweyo kwiYouTube. Ungalibali ukubhalisa! 😘
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » IXiaomi Mi Band 2, oyena mlingane ubalaseleyo we-iPhone yakho [ividiyo]
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba inqanaba lentliziyo liyahambelana hayi nesicelo seRuntastic
Molo Miguel. Andicingi. Yonke imisebenzi yeXiaomi Mi Band iyahambelana nesixhobo seMi Fit uqobo (kunjalo) kunye neMpilo yeapp ye-iPhone, ukwazi ukubona zonke iiparameter ezilinganiswe ngebracelet apho. Kodwa ndicinga ukuba ayihambelani nenye insiza efana neRuntastic.
Molo, ndingene ngengozi kwaye ndizibonile izimvo zakho. Ndikuxelele ukuba kunokwenzeka, kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso olubizwa ngokuba yi-HR yam kwi-AppStore. Xa uyifakile ulandela la manyathelo alandelayo:
1.- ubaleka iFit yam ukuba isongo lingqamane neselfowuni
2.- kwi-miHR usebenzisa ukubetha kwentliziyo
3.- Kwi-runtastic kufuneka ukhangele isixhobo sokubetha kwentliziyo kwaye kufuneka sivele.
Kucacisiwe kancinci, kodwa ukuba ukhangela kuGoogle okanye kwiYouTube ngokuqinisekileyo uya kuyifumana ukuba yenziwa njani
Ewe kunjalo sitsho
Molo, unayo istopwotshi?
Phendula Ja ier
ULili pe sitsho
Molo, bendifuna ukwazi ukuba ngaba i-mi band 2 iyahambelana ne-iphone xa isiza EKUFUMANENI IZAZISO Kwezinye IZICELO, njengakwi-Android, kuba ndixelelwe ukuba kwi-iphone i-band band iyakwazi ukwazisa iifowuni kunye ne-WhatsApp (ngokungqongqo Ukuthetha ngezicelo) Enkosi!
PS: iposti elungileyo
Phendula uLili pe
Ndingathanda ukwazi ukuba yeyiphi na isicelo endinokuyikhuphela kwi-iphone yam ukuze ndikwazi ukusebenzisa ibhendi yam 2. Ndikhuphele ukulunga kwam kwaye ayizi ngeSpanish.
Molo, enkosi ngolwazi. Into endifuna ukuyazi kukuba ungazibona iikhalori ezikwiskrini okanye kufuneka uye kwi-app?
Enkosi ndiyathemba ukuphendula nceda.
Ngaba ikhona enye i-myban2 iphone app? Ayizukundivumela ukuba ndiqhagamshele ndiyicimile kwaye ayizukundivumela ndiyifake kwakhona
Molo apho!! Maricuchy kwizimvo zakho ndiza kukuxelela ukuba xa unokuyibeka ngeSpanish, kuya kufuneka ukhethe iSpanish yaseMexico ngolwimi lwe-iPhone. Ngokubhekisele kwizaziso, ndine-iPhone6 ​​kwaye akukho namnye kubo osebenzela mna. Iminxeba nje. kwaye akukho mntu undinika isisombululo
IFayileAssistant yasimahla yexesha elimiselweyo
Utshintsho kwiDropbox: Ukuya kwiqonga lenkonzo